“Manchester City diyaar uma ahan jadwalka mashquulka badan” – Pep Guardiola – Gool FM
“Manchester City diyaar uma ahan jadwalka mashquulka badan” – Pep Guardiola
(Manchester) 16 Juun 2020. Tababaraha reer Spain iyo kooxda kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola ayaa aaminsan in kooxdiisa iyo kooxaha kale ee Premier League aysan diyaar u aheyn jadwalka kulamada ee mashquulka ah ee xilliyada soo socda, maadaama ay ciyaartoyda galeen nasiino seddexdii bilood ee la soo dhaafay, sababa la xiriira caabuqa Coronavirus.
Manchester City ayaa isku diyaarineysa inay dhameystirato kulamada horyaalka Premier League, waxayna habeen dambe ee Arbacada la ciyaari doonaan kooxda reer London Arsenal, halka sidoo kale ay ciyaari doonto tartamada Champions League iyo FA Cup.
Sidoo kale Manchester City ayaa waxay kula ciyaari doontaa kooxda Burnley garoonka Etihad Isniinta soo socota, kaddib waxay kula ciyaari doontaa Chelsea koobka FA Cup, kahor inta aysan wajihin Axada naadiga Newcastle.
Pep Guardiola ayaa sheegay, sida laga soo xigtay wargayska “The Guardian” ee dalka England:
“Diyaar uma nihin, kaliya ma ahan Manchester City, balse dhamaan kooxaha, sidaas darteed waa inaan raacno siyaasad wareejinta iyo adeegsiga dhammaan ciyaartoyda”.
“Waad ciyaari kartaa kaddib saddex todobaad oo fasax ah, laakiin waxaan sariir ku jiifnay laba bilood, waxna ma qabanin, taasina waa sababta ay u maqan tahay awooda ciyaartoyda”.
“Laakiin waa inaan bilaawno isla markaana aan dhameyno xilli ciyaareedka, si aan isugu dayno inaan yareyno qasaaraha dhaqaale ee kooxda”.